विदेश पठाइदिन्छु भन्नेले काठमाडौंबाट जनकपुर पठाएका विश्वनाथ दुई वर्ष देखि वेपता | रेडियो फूलवारी १०५.४ मेघाहर्ज
Home मुख्य समाचार विदेश पठाइदिन्छु भन्नेले काठमाडौंबाट जनकपुर पठाएका विश्वनाथ दुई वर्ष देखि वेपता
विश्वनाथको श्रीमति र छोरा/छोरीहरु
जनकपुर । २०७१ कार्तिक २५ गते धनुषा बसहिया गाविस ३ का विश्वनाथ दासलाई विदेश पठाउने एजेन्टले काठमाण्डौँ लगे । विदेश कमाउन हिडेका विश्वनाथलाई दुई वर्ष भन्दा बढी हुन लाग्यो तर उनी विदेश पुगेन् । एजेण्टले उनलाई काठमाण्डौँबाट घर फिर्ता पठाई दिएका थिए । तर, उनी अहिले सम्म घर फर्केका छैनन् । कहाँ वेपता भयो विश्वनाथ त्यो पनि कसैलाई थाहा छैन् ।
विश्वनाथलाई मारिदियो की, के गर्यो शंका गर्ने ठाउँ त थुर्पै छ । विश्वनाथकी छिमेकी मन्जु कर्णले सुनाइन्, ‘प्रहरीमा जाँदा फर्केर आइहाल्छ भन्छन् । उसलाई काठमाडौं लैजाने मान्छे पैसावाला छ ।’
सोही गाविस बसहिया ८ का रामबाबु सहनीले विदेश पठाइदिने भन्दै विश्वनाथलाई घरबाट काठमाडौं लगेका थिए । त्यसअघि पनि उनले विश्वनाथलाई विदेश पठाइदिने भन्दै काठमाडौं लगेर फर्काएका थिए । तर यसपाली भने काठमाडौंबाट रामबाबु सहनी एक्लै फर्किए । जिउँदै भएको भए त फोन गर्नुपर्ने हो उनको छिमेकी कर्ण भनिन् ।
रामबाबु फर्किएको तीन दिनसम्म पनि आफ्ना श्रीमान् नफर्किएपछि रिनादेवीले खोजी गर्न थाले । विदेश पठाउने भन्दै काठमाडौं लैजाने रामबाबुसित सोधे, मेरा श्रीमान् कहाँ छन् ? जतिपटक सोधेपनि रामबाबुले एउटै उत्तर दिन्थे, विश्वनाथलाई काठमाडौंबाट गाडी चढाएर जनकपुर पठाएँ । कहाँ छन् आफुलाई जानकारी छैन् ।
तर विश्वनाथ अहिलेसम्म काठमाडौंबाट धनुषाको बसहियास्थित घरमा पुग्नु भएको छैन । यी दुई वर्षमा विश्वनाथकी श्रीमती रिनादेवी दास श्रीमानको खोजी गरिपाउँ भन्दै दुई हात जोडेर अनेक संघसंस्थामा पुगे । तर, केही जानकारी पाएनन् ।
विश्वनाथको जाने ठाउँ कतै थिएन । काठमाडौंमा आफन्त पनि थिएनन । तब परिवारका मानिसले खोज्नु कहाँ ? रिनादेवीलाई खोजी गर्न सघाउने आफन्त पनि छैनन । विदेश पठाइदिन्छु भनेर विश्वनाथलाई घरबाट लैजाने रामबाबु भने गाउँमै छन् ।
रिनादेवीले तीन पटक त जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा रामबाबु विरुद्ध किटानी उजुरी समेत दिए । त्यसको केही सुनुवाई भएन । ‘छरछिमेकले पनि फर्केर आइहाल्छ भन्छन् । प्रहरीले पनि यो मान्छे फर्किहाल्छ नि भनेर पठाउँछ ।’ रिनादेवीले भनिन् ‘मारे कि जिउँदै छन् कि केही थाहा छैन् । जिउँदै भए त फोन गर्नुपर्ने हो ।’
झुपडीको छानाबाट घामपानी छिर्ने भइसक्दा पनि विश्वनाथ फर्केनन् । खेतीपाती गर्ने, र माछा मारेर बेचेर आउने पैसाले जहान परिवारलाई खाने लाउने खर्च जुटाउन विश्वनाथलाई मुश्किल थियो । त्यसैले गर्दा उनले विदेशको सपना देखे । तर विदेश जाने भनेर घरबाट हिँडेदेखि सम्पर्कमा नहुँदा छोराछोरीको लालनपालन गर्ने जिम्मेवारी विश्वनाथकी २८ वर्षीया श्रीमती रिनादेवी दासको काँधमा आइ लागेको छ ।
ऐलानी जग्गामा रहेको झुपडीको छानाबाट घाम पानी छिर्ने भइसक्यो । श्रीमान् जिउँदो छन् कि छैनन् भन्ने पिरमा बाँचेकी रिनादेवीले गाउँघरमा मजदुरी गरेर कमाएको खर्चले १० वर्षभन्दा कम उमेरका पाँच जना छोरीहरुको लालनपालन गर्नुपर्छ । श्रीमान् बेपत्ता भएको पिर त रिनादेवीलाई छँदैछ, सँगै आफू र आफ्ना छोरीहरुको सुरक्षाको चिन्ता पनि बढदै गएको छ ।